Moiyor or sónna dóroya hawa (Crow pretending as peacock) – Rohingya Language Foundation
Moiyor or Sónna Dóroya Hawa
Agor zobanat mazé uggwá dhók góri zanedé hawa aiccíl. Hawa íba yé moiyor or zat oré bicí fosón goré. Moiyor ókkol dekíle moiyor or díkka cúndor óitou mone hoó. Ótolla bóuli, moiyor or fóoir okkól tuai nizor gaat lagaiyé. Tói, moiyor or sónna dóri moiyor or zák aséde éçe giyé.
Tarfore, moiyor ókkol ór éçe foóñiccé. Hawa ibá yé moiyor ókkol óre hoórde aññí yó moiyor ói gíyigói. Aijja loti aññí yó tuáñrár fúañti tákiyóum. Éen hoói moiyor or sónna dorí moiyor ókkol ór zák ót táke. Moiyor ókkol é hoórde, eén dhók gorérde faik ibá añárár moiyor or zat noó. “Tui óiyos dé hawa.” Éen hoói moiyor ókkol é hawa ré berái súrai dóri kúth marer. Zehón kúth marer, hawartú moiyor or fóoir lagaiya aiccíl de íin óite, nizor gín foijjonto uçí giyói.
Hawa íba bicí duk fai, nizor zat hawa ókkol ór hañsé waapes aiccé. Lékin, nizor zat hawa ókkol é hoórde, hawa íba nizor zat óre boro bouli no buzé. Oinno zat uggwá ré boro bouli buzé. Ótolla hawa ókkol é hoórde, tui añárár háñsé nu aaíc. Éen hoói hawa ókkol ór zák ottu yó neelai diyé.
Moiyor or zat oré fosón gorí, moiyor or sónna loi, moiyor or zák ot tákitou giyéde hawa ré, moiyor or zat óttu yó, ar hawar zat ottú yó, duní zat ottú nafórot gorí neelai diyé. Tóile hawa zák sará óigíyói.
Ótolla nizor koum oré niróc buzí, ek dhéikka rakí yóre, oinno koum uggwá ré boro, cúndor ar barík buzíle, honó fáaida nofa dé yían, buzá foribóu.
Lekóya:  Citizen Of Arakan,Bormá, Aikkaf, Nazir Fara
Father of Rohingyalish. Eng. Mohammed Siddique Sáb (UK)
ရေးသားသူ:: စီတီဇိန် အောဖ့် အာရ်ကာန်
ရှေ့အခါက ကြွားဝါတတ်သော ကျီးတကောင်ရှိလေသည် ။ ထိုကျီးသည် ဒေါင်းများကိုမြင် လျှင် ဒေါင်းကဲ့သို့လှပလို၏။ ထို့ကြောင့်ဒေါင်းတောင် များကို ရှာပြီးလျှင် သူ့ကိုယ်၌ တပ်ဆင်၍ဒေါင်းတို့နေရာသို့ သွားလေ၏။
ဒေါင်းတို့နှင့်တွေ့သောအခါ ကျီးက ငါသည် ဒေါင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ ဒေါင်းယောင်ဆောင်၍ နေလေ၏။ ဒေါင်းတို့ကလည်း ဟယ့် ငှက်ကြွား၊ သင်သည်ဒေါင်းမျိုးမဟုတ်၊ ကျီးသာဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြ လေ၏။ ဒေါင်းတို့သည် ကျီးကို ဝိုင်း၍ ထိုးဆိတ်ကြကုန်၏။ ထိုအခါ ကျီး၏ကိုယ်မှာ ဒေါင်းတောင် များသာမက ကျီးတောင် များပါ ကျွတ်ကျကုန်၏။
ကျီးသည် လွန်စွာနာကျင် လျှက် မိမိတို့အမျိုးဖြစ်သော ကျီးတို့ထံ ပြန်ပြေးလေ၏။ ကျီးတိုးကလည်း သင်သည် မိမိတို့၏ အမျိုးကို အထင်မကြီး၊ သူတစ်ပါး၏ အမျိုးကိုသာ အထင်ကြီးသည်။ ငါတို့ထံမလာနှင့်ဟု နှင်ထုတ်ကြ၏။ ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီးကို ဒေါင်းတို့သာမက ကျီးတို့ကပါ မုန်းတီးကြ လေသတည်း။
ကိုယ့်အမျိုးစွန့်၍ သူတစ်ပါးအမျိုးကို အထင်ကြီးပြီး အတုခိုးပါက အကျိုးမရှိကြောင်း သိရှိနားလည်ရပါမည်။………..
ရေးသားသူ:: ★ Citizen Of Arakan★